Saturday September 22, 2018 - 15:53:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii 2-aad wuxuu ka baaqanayaa shirka madaxda Q.Midoobe ee dhowaan ka furmaya magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Shirkan oo sanadkiiba mar laqabto ayay madaxweynayaasha dowladaha aqoonsan waxa loogu yeero Sharciyadda caalamiga ah khudbado ka jeediyaan, ilo wareedyo ayaa sheegaya in culeysyo siyaasadeed oo isbiirsaday aawgeed uusan Farmaajo udhoofi doonin New York.
War qoraal ah oo kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in kulan degdeg ah uu Farmaajo isugu yeeray madaxda maamulka Galmudug ee khilaafka ba'an u dhaxeeyo, khudbado ay xildhibaannada baarlamaanka maalmo ka hor ka jeediyeen fadhigii baarlamaanka ayaa muujiyay xaddiga uu gaarsiisanyahay carada ay xildhibaannadu uqabaan Xukuumadda Kheyre.
Guuxa siyaasadeed ee magaalada Muqdisho ka socda ma ahan mid kheyr ugu bishaareynaya Farmaajo iyo Ra'iisal wasaarihiisa oo sida muuqata aan waqtiga wada dhammeysan doonin, dadka odorosa xarig jiidka siyaasadda Soomaaliya waxay saadaalinayaan in haddii Farmaajo uusan iska hor leexin Kheyre uu cadaadis kala kulmi doono baarlamaanka ayna mooshin ku ridi doonaan.
Ammaan darrida magaalada Muqdisho iyo cilaaqaadkii u dahxeeyay dowladda Federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada oo lagu daray diyaarinta ciidamada isku dhaf ah waa waxa ugu weyn ee cadaadiska ku ah Farmaajo oo 'Beesha Caalamka' ay xisaabtan ladaba taagantahay.